Kwenzekani kuma-smartwatches uma ethinta amanzi kakhulu?
Iyini incazelo yewashi elihlakaniphile elinokungenwa kwamanzi? Kungenzeka yini ukuthi uhlale uthintana namanzi isikhathi eside? Eqinisweni, ibanga elingangeni uthuli nelingenamanzi lemikhiqizo kagesi livame ukuboniswa b ...
Kuyini ukuqapha kokushaya kwenhliziyo?
Okuthiwa ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kuwashi elingarekhoda ngokunembile izinga lokushaya kwenhliziyo yethu ngesikhathi sangempela ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba. Indima yokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo ekusebenziseni okunenjongo isobala kakhulu. Kunemigomo emibili ejwayelekile yokulinganiswa kwetafula lokushaya kwenhliziyo, eyodwa i-curr yenhliziyo ...